Cudurrada faafa: hanjabaadda aan la arki karin - Dokumentiga (2020) - Afrikhepri Fondation
Talaado, Oktoobar 27, 2020
Cudurrada faafa: khatarta aan la arki karin - Documentary (2020)
En Shiinaha, bilowga cudurka faafa ee oof wareenka ku xiran coronavirus ayaa ajandaha ka dhigaya arinta faafa iyo halista ay ku matalayaan heer caalami. Sahan adag oo la sameeyay 2014 si naloo xusuusiyo saamiyada halistaan ​​aan muuqan. Lixdan sano gudahood, in ka badan saddex boqol iyo konton cudurro faafa oo cusub ayaa soo muuqday: SARS, H1N1, H5N1, Ebola. Soo bixitaan fayrasyo ​​ah oo umuuqda inay soo dedejinayaan. Si lama filaan ah, khubaradu waxay la yaaban yihiin: goorma ayaa shaqo-joojin cusub oo adduunka ku faafi doonta? Belaayo, ifilada Isbaanishka, furuqa, AIDS. Taariikhda waxaa lagu gudbiyaa dhacdooyin faafa oo baabi'iyay tirada dadka. Laakiin, aaway cilmi-baaristii maanta? Diyaar ma nahay?
Filimku wuxuu raacayaa raadadkii saddex fayras oo si gaar ah u hanjabaya: hargabka H7N9 ee Aasiya, Mers-CoV, ina adeerkiis SARS, wuxuu ka hawl galaa Bariga Dhexe, iyo fayraska Ebola, oo kiciya argagaxa ugu xun Afrika. Waa Xagee. Tusaale ahaan, qandhada Ebola waxaa lagu kala qaaday fiidmeerta miraha, iyo hargabka Aasiya H5N1 oo ay qaadaan shimbiraha haajira. Iyadoo wajahaysa khatarta, adduunka sayniska ayaa abaabulaya.
Cudur faafa: khataraha dhabta ah iyo digniinta beenta ah
1 cusub laga bilaabo € 8,99
Iibso € 8,99
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Oktoobar 27, 2020 6:39 am